दीपकराज गिरी लेख्छन्, ‘अन्तरवार्तादेखि होशियार !’ – Mero Film
दीपकराज गिरी लेख्छन्, ‘अन्तरवार्तादेखि होशियार !’
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले युट्युबका पत्रकारलाई अन्तरवार्ता नदिने बताएकी थिइन् । उनले युट्युबका पत्रकारले हेडलाइन बङ्गाएर आफ्नो बेइज्जत गरेको बताएकी थिइन । त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट अर्थात आज अर्का अभिनेता दीपकराज गिरीले लामो स्टाटस लेख्दै अन्तरवार्ता देखि होसियार रहन आग्रह गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुुक मार्फृत अन्तरवार्ताका लागि सहग रहन भनेका छन् । फेसबुकमा उनले लेखेका छन् , ‘आज म लेख्दैछू……अन्तरवार्ता देखि होशियार ! केहि दिन देखि देखिरहेको छु । कलाकारहरूले अन्तरवार्तामा बोलेको कुरा एकपछि अर्को बिबादमा आइरहेको छ । ’ उनको यो भनाईले अभिनेत्री साम्राज्ञीलाई मात्र कटाक्ष गरेको छैन । पुजा शर्मालाई पनि छोएको छ । पुजा शर्माले केहि समय अगाडी एउटा टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ताले पछिल्लो समय माहोल तताएको छ ।
उनले पुजा शर्मालाई लक्षित गर्दै लेखेका छन् ,‘कोहि राष्टियताका बारेमा चिप्लिरहेका छन् ,कोहि देशको जिल्ला , प्रदेशको बारेमा चिप्लिए !
दीपकराज गिरीले अरुलाई मात्र ब्यङ्ग्य हानेनन् । आफ्नै सहकर्मी दीपाश्री निरौलालाई पनि ब्यङ्ग्यको तारो बनाए । दीपाले उहि टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा महानायक को हो भन्ने प्रश्नमा महानायक नै छैनन् राजेश हमाल महानायक हो र ? कि तपाईले बनाइदिएको हो ? भन्ने प्रश्न उल्टै पत्रकारलाई सोधेकी थिइन । जुन अहिले टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
दीपकराज गिरीले भनेका छन्, ‘कोहि सुपरस्टार को हो भन्ने बारेमा चिप्लिए ! कोहि नेपोचिज्मका बारेमा, कोहि के मा कोहि के मा । ’
उनको आशयले के बुझिन्छ भने बुझेर मात्र अन्तरवार्ता दिनुपर्छ । हावाको भरमा अन्तरवार्तामा लाग्दाको यस्तो परिणाम आएको हो ।
उनले लामो लेखेको स्टाटसको बिचमा प्रश्न गरेका छन् , ‘यो सबै किन भैरहेछ ?’ अन्तरवार्तालाई नाइ भन्न नसक्ने हाम्रो बानीले गर्दा यस्तो अवस्था आइरहेको छ !
दीपकले साम्राज्ञी कै स्टायलमाा भनेका छन् ,‘पत्रकार भाइले फोन गर्यो । लौन अन्तरवार्ता दिन पर्यो , क्यामाराको ढक्कन खोल्यो सुरू भैहाल्यो , टेडा मेडा प्रश्नको झटारो सुरू हुन्छ । हामी कलाकार बिना तैयारी पत्रकार रिसाउला भनेर कनि कनि बिना तैयारी बोल्न सुरू गर्छौ । ’जसो जसो अन्तरवार्ता अगाडि बढ्छ, हामी कलाकारको जिब्रो चिप्लिन थाल्छ ,ब्यबसायिक पत्रकार मनमनै खुशि हुन थाल्छ ।’
उनी थप लेख्छन् ,आहा , ओहो, टिआरपी !!
पत्रकारले फेरी उत्साहित हूदै सोध्न थाल्छ ‘मुस्ताङ कुन जिल्लामा पर्छ था छ ? कलाकारले एकछिन टाउको कनाउदै जवाफ दिन्छ, ‘मनाङ जिल्ला होला ’ हाहाहाहा लामो हाँसो पनि जान्छ । ’उनले अन्तरवार्ता शाखा अधिकृतको जागिरमा लिइने अन्तरवार्ता जस्तो हुन थालेको र कलाकार नजानेको विषयमा बोल्न थालेको बताएका छन् । गलत बोलेको छु भन्ने कुरा कलाकारलाई थाहा नहुनुले पनि यो समस्या आएको उनको भनाई छ । उनी लेख्छन्, अन्तरवार्तामा गलत बोेली आएपछि पत्रकार मज्जाले हाँस्छ । पत्रकार अन्तरवार्ता लिएर खुसी हुँदै जान्छ र भोलीपल्ट अन्तरवार्ता आउँदैन । अन्तरवार्तासँगसँगै आपस पनि आइलाग्छ , जतातै भाइरल , विरोध , गालीको बर्षा ।।’
यस्तो समाचारले कलाकारको निन्द्रा ३ दिनको लागि गायब हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले व्यङ्ग्य मात्र गरेका छैनन्, सबै कलाकारहरुलाई सुझाव पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी किन यसरी बिना तैयारी बोल्न अगाडि सर्छौ ? किन बारम्बार चिप्लेर लज्जित हूदै माफी माग्छौ ? अन्तरवार्ता दिँदा‘ सेलेक्टिभ किन हूदैनौ ?’
हेडलाइनको खोजीमा हुने पत्रकारहरुलाई अन्तरवार्ता दिन कलाकार तछाँड मछाँड गर्ने गरेको बताए । उनले त्यस्ता पत्रकारको ट्रयापमा परेर आफुलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले थपेका छन्, ‘राम्रो नियत भएको, हेडलाइनमा जोड नदिने , सकारात्मक पत्रकारीता गर्ने साथिहरूलाई कहिल्यै स्थान दिदैनौ ।’ उनले कलाकारले सामान्य ज्ञान कण्ठ गर्ने पर्छ भन्ने छैन र प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाइ पनि हंगेरीको प्रधानमन्त्री को नाम था होला ? भिमसेन थापा पछि को प्रधानमन्त्री थिए था होला ? केपि ओली ज्यूलाई पहिलो कलर नेपाली फिल्म कुन हो था होला ? सबैलाइ सबै कुरा था हुनु जरुरी छैन । अरुलाई दोष दिनुभन्दा सकेसम्म चटपटे अन्तरवार्ता भागौँ भन्दै सुझाव दिएका छन् । अन्तमा उनले भनेका छन् , ‘आफ्नो ब्यक्तित्व , आधा घन्टाको अन्तरवार्ताबाट स्वाहा नपारौ !….. जय नेपाली चलचित्र !!!
२०७७ असार १७ गते ११:२१ मा प्रकाशित